FS123 ဘို့ Fairchild က C-2004 K သည်ပေးသူ Package ကို DOWNLOAD - Rikoooo
FS123 ဘို့ Fairchild က C-2004 K သည်ပေးသူပက်ကေ့
အရွယ် 8.65 ကို MB
downloads ရယူရန္7863
Author: ဗလာဒီမာ Zhyhulskiy
ဘို့ FSX သဟဇာတမူကွဲ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အဆိုပါဗားရှင်းဒဏ္ဍာရီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏3- ကောင်းစွာရုပ်ရှင်ရုံ "Air လေကြောင်းလိုင်းအမေရိကတိုက်" (M.Gibson & R.Downey) မှလူသိများဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ၏ဝါရင့်။ ဗားရှင်းအသစ်ကုန်တင်တစ်ချခြင်းအားဖြင့်လေယာဉ်မှူးများနှင့်ကာတွန်းခြင်းဖြင့်ကာတွန်းတွေနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲအမြင်အာရုံမော်ဒယ်၌။ လုံးဝလုပ်ငန်းများ၌ VC ကိုဖြစ်ပါသည် - လုံးဝပြုပြင်သောခရိုနီများနှင့်ကာတွန်းအထွာမြင့်မား dpi, လုံးဝကာတွန်း Co-လေယာဉ်မှူး။ Panel ကို။3ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - Air ကိုအမေရိက, FAV, USAF (camo) ။ ကုန်တင်သေတ္တာ, အလေထီးနှင့်အတူဝက်၏တစ်စက် (? တစ်ရုပ်ရှင်ရုံသတိရပါ) ၏တစ်စက်, အင်ဂျင်နှင့်မြေပြင်လေယာဉ်ကွင်းပေါ်တွင်ရွေ့လျားမှုမှာဖုန်မှုန့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစတင် -4ထုံးစံအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဆက်ပြောသည်ကြသည်။တပ်ဆင်ဘို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက် enclose (ReadMe.doc) ဖြစ်ပါသည်.
ဘောင်းဘီတို SD3-30 FS2004